Mobaayilii fi ismaartfoonii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:16 22 Adooleessa 20214:16 22 Adooleessa 2021
Abdiifi sodaa tajaajila telekoomii dabalataa qabaachuun qabatee dhufu
Jiraataa magaalaa Jimmaa kan tahe Mahaammad Abbaa Garoo bilbilli harkaa isaa waan hundaasaa akka tahe hima. Bilbilli harkaa isaa kun tajaajila qunnamtiin alatti maallaqa ittiin sochoosuu fi bittaa gurgurtaaf faayidaa inni qabu guddaa tahuu hima.
...tti maxxanfame 13:45 15 Waxabajjii 202113:45 15 Waxabajjii 2021
Itoophiyaan Itiyoo-telekoom harka 40 gurguruuf
Ministeerri Maallaqaa Itoophiyaa fuula tiwiitara isaarratti Wixata Waxabajji 14, 2021 akka beeksisetti dhaabbileen idil-addunyaa caali-baasiirratti hirmaatan sanada fedhii isaanii ibsu guyyoota 30 keessatti akka dhiyeeffatan waamicha dhiyesseera.
...tti maxxanfame 4:26 9 Waxabajjii 20214:26 9 Waxabajjii 2021
'Hanga namoota miiliyoona 1.5f carraa hojii uumna' - Hoji-gaggeessaa Safaricom
Itoophiyaan damee telekoomiirratti akka hirmaataniif gurmuu kubbaaniyoota telekomii addunyaaf eeyyama kennuushee dhiyeenya beeksisuu hordofee, waliigalteen guyyaa Kibxataa mallattaa'eera.
...tti maxxanfame 4:10 26 Caamsaa 20214:10 26 Caamsaa 2021
Immoojiiwwan afaan addunyaa turjumaana hin barbaanne tahaa jiruu?
Immoojiiwwan afaan addunyaa turjumaan hin barbaanne tahaa jiru? Immoojii kamtu biyya kamitti baay'inaan hojiirra oola?
...tti maxxanfame 4:42 13 Caamsaa 20214:42 13 Caamsaa 2021
Kanaan booda Itoophiyaa keessatti waan 'qallaba' bitattanii, akkasumas meeshaa bitattaniif ykn tajaajila argataniif kaffaltaa raawwachuuf hancufaan quba jiifattanii maallaqa lakkaa'uun hafuu danda'a.
...tti maxxanfame 5:22 1 Caamsaa 20215:22 1 Caamsaa 2021
Waa'ee Itoophiyaa addunyaaf kan beeksisaa jirtu 'Kukkuluu'n maali?
Kaampaanii Itoophiyaa Qinee Geems jedhamuun kan midhaaffame taphni moobaayilii 'Kukkuluu' jedhamu, nama taphatu amala hindaaqqoo itti kennee taphachiisa. Gufachiisa isin dura jiru dabruun, nama isin hari'aa jiru jalaa hangam fagaachuun adeemtu kan jedhudha milkaa'inni geemii kanaa.
...tti maxxanfame 7:51 13 Ebla 20217:51 13 Ebla 2021
Appii fayyadamtoonni wayita lafoo deeman of-fuuldura akka ilaalan yaadachiisu
Suuraaleen appii kanaa tahan akka mul'isanitti, iskiriinii bilbilaarratti akeekkachiisni yookaan yaadachiisni ol ilaali jedhu ni ergama.
...tti maxxanfame 6:14 19 Guraandhala 20216:14 19 Guraandhala 2021
Dursaan appii jaalallee ittiin barbaaddatan 'sagaagaltummaa jajjabeessuun' to’atame
Hundeessaan appii falmisiisaa ‘’shuugar daadii’’ Sugarbook jedhamu Maaleezhiyaatti seera farra-sagaagaltummaa daddarbuun qabame jedhe poolisiin Kamisa kaleessaa.
...tti maxxanfame 14:30 12 Guraandhala 202114:30 12 Guraandhala 2021
Dhaabbati moobaayilii maamila darbaa kaffalchiise yuroo miiliyoona 10 ol adabame
Neetwoorkiin moobaayilii UK O2 jedhamu maamiloota darbaa kaffalchiise abbaa taayitaa to'annoo telekoomii Ofcom jedhamuun yuroo miiliyoona 10.5 adabame.
...tti maxxanfame 11:21 27 Amajjii 202111:21 27 Amajjii 2021
Tigraayitti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii irra deebiin maaliif adda cite?
Sararri faayibarii magaalota Maqaleefi Addishihuu gidduu jiru kutamuusaatiin, Kibxata sa'aa booda eegalee naannoo Tigraayitti tajaajilli bilbilaa adda cituu, hooggantuun Itiyoo Telekoom Fireehiwot Taammiruu BBCf mirkaneessan.